ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “သမိုင်းအမှန်မှာ အရိုးတွန်သံတွေ ကြားရမယ် - ဦးဝင်းတင်” (ရုပ်သံ)
“သမိုင်းအမှန်မှာ အရိုးတွန်သံတွေ ကြားရမယ် - ဦးဝင်းတင်” (ရုပ်သံ)
ဘဘ ခင်ဗျား ၊
. .. ယနေ. ကာလမှာ တစ်စုံတစ်ဦး ရဲ. နောက်ကို
တစ်စုတစ်ပြုံ က မျက်စိမှိတ် (မှားမှားမှန်မှန်) လိုက်တဲ.
ခောတ်မရှိတော. ပါဘူး ၊
... ဒါပေမယ်. လူဆိုတာမှားတတ်တဲ.အမျိုး မို.
တစ်ကွေ.ကွေ.တော. မှားမှာပါ ၊
ဒါပေမယ်. (ဘယ်သူ .......... ) မို. မှားပေမယ်. နှုတ်
ဆိတ် နေမှ ဆိုတာမျိုး က များများ နေ ရင် တိုင်းပြည် အနာဂါတ်ဟာ ရှေ့မတိုး ၊ နောက်မဆုတ် ဖြစ်နေမှာပါ ၊
.. ဘဘ ... ဆက်လက် ဝေဖန်ထောက်ပြ ပြီး
I agree with you Saya U Win Tin.
Why should we support those criminals who are ruling the country. As long as no genuine government in Burma there will be no peace no equality and revolution will come one after another in the near future.
မြန်မာပြည် အနာဂတ်မှာ ဘဘ တို့ ခံစာခဲ့သလ်ို နောက်လူငယ်တွေ ပြည်သူတွေ မခံစားရတော့အောင် အာဏာရူး ထင်းရာစ်ိုင်း ဥပဒေ မဲ့ လုပ်တက်သူတွေက်ို ချေမှုန်းသုတ်သင်နိုင်ပါစေ
very good indeed. Why Uncle U Win Tin was not popular in Western Society or international wise. It is not fair. He is as courageous as Daw Aung San Suu Kyi. Something is not fair.
Very good indeed. Something is not fair because Uncle U Win Tin is as courageous as DASSKyi. Why isn't he popular in international/Western society? Is that because of his parental background?